Markay tahay Qualcomm waxay rabaan inay u istaagaan Apple Silicon oo wata chips-kooda cusub ee Nuvia | waxaan ka imid mac
Tan iyo markii Apple ay soo saartay MacBookga cusub Apple Silicon M1 Processor, Dhammaan indhaha tartanka waxay eegayaan shirkadda Cupertino. Oo waa in awoodda iyo in ka badan dhammaan faa'iidooyinka ay bixiyaan kuwan soo-saareyaasha Apple ay yihiin kuwo cajiib ah marka la barbar dhigo inta kale ee chips-yada suuqa. Ma rabno inaan sheegno in soo-saareyaasha Apple ay yihiin kuwa ugu fiican, si fudud inay u suurtagashay inay si wanaagsan ula shaqeeyaan saldhiggooda si ay u bixiyaan awood iyo hufnaan cajiib ah.
Qualcomm oo leh dhowr injineero hore oo Apple ah oo madaxa jooga ayaa raba inay istaagaan
Way wanaagsan tahay in tartan iyo loollan ka dhexeeyo shirkadaha waaweyn ee wax soo saara. Tani waxay runtii faa'iido u leedahay isticmaalayaasha kuwaas oo arka sida calaamaduhu ay ugu dadaalaan inay bixiyaan waxqabadka ugu fiican iyo qiimaha jajabkooda. IYOXaaladdan oo kale Nuvia, soo saaraha CPU oo leh dhowr injineero hore oo Apple ah Hadda waxay ku jirtaa gacanta Qualcomm, oo ah shirkad soo saarta soo-saareyaasha kuwa Cupertino oo si macquul ah hadda u aragto shaki waxa Apple ka gaadhay processor-rada M.
Waa in la ogaadaa in maamulaha guud ee Nuvia uu yahay "aqoon hore ee Apple" waana in uu yahay Gerard Williams. Williams hadda waa ku xigeenka sare ee injineernimada ee Qualcomm iyo mar waxay dacwad ka heshay Apple ka dib markii ay ka tagtay shirkadda 2019 isticmaalka tignoolajiyada shirkadda Cupertino oo ay shaqaale u keentay Nuvia. Xidhiidhku maaha in uu yahay mid aad u wanaagsan oo u dhexeeya Apple iyo Williams, dhab ahaantii dacwadda lama xalin wakhtigan. Si kastaba ha ahaatee, kooxda Williams waxay ku sii socotaa iyadoo ay weheliso Nuvia hadda iyada oo qayb ka ah Qualcomm si ay ula tartanto soo-saareyaasha M-taxane ee Apple. Waanu arki doonaa waxa mustaqbalka inagu ah kuwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Qualcomm waxay rabaan inay ku hor istaagaan Apple Silicon iyaga oo wata jajabkooda cusub ee Nuvia
Muddada dib u dhigista lacagaha kaadhka Apple waa la kordhiyey